About Us - Shanghai Kuhle China Imboni Co., Ltd.
kwemboni yethu itholakala emzini ashukumisayo kakhulu esifundeni Asia-Pacific, Shanghai. Yonke imikhiqizo yethu kusuka design, isikhunta evulekile, isampula, ukukhiqizwa, Frosted, izinga lokushisa eliphakeme olulodwa anombala multicolor ukuphrinta, gilt (esiliva) nginyathela, imidwebo, ukuhlangana ukufeza sokuma ukungalethwa kwezidingo. Imikhiqizo yethu materials ukhetho, izinto zokusetshenziswa, izithako, ukuncibilika uhlelo, ukwakha, annealing, ukucubungula, ukuhlola, emabhokisini nezinye izinqubo ukukhiqizwa usuqedile ngaphansi kohlelo izinga ISO90002.
Ngezinye emaphaketheni KAKHULU, asigcinanga unayo ukhetho olukhulu kuphi ngengilazi nokupakishwa plastic kodwa futhi ngokuqhubekayo ekwandiseni umkhiqizo wethu ezihlukahlukene. Ngokuhlanganisa inkonzo uchwepheshe amakhasimende 'nge ukusabela okusheshayo, sinalo siqu inkampani yethu zokuhweba zamazwe omhlaba e-Shanghai kakhulu. Sine isipiliyoni kakhulu ukulawula izinga, ukumaketha ngamazwe, ukuthekelisa, Logistics, ngakho singaba amehlo akho nezindlebe e China ukuze uqiniseke supply imikhiqizo ngakwesokudla intengo engcono, nge lemfisha phambili.
Umsebenzi wethu ukuba:
● Hlinzeka ukusungula Impahla Isixazululo
● Hlangana noma idlule izidingo Amakhasimende ethu 'kanye okulindelwe
● Hlinzeka eliphezulu emaphaketheni ikhasimende-eklanyelwe
● Ngesikhathi ukulethwa
● Silindele ukuba 'somphathi mutual nokubambisana amakhasimende emhlabeni wonke